Masiaka be ny vadiko, tsy avelany mihetsika mihitsy aho fa tsy maintsy izay tiany foana no atao.
Mahazo mandà tsy hiray ara-nofo amin’ny vadiny ve ny vehivavy ?
Tafiditra ao anatin’ny adidy sy porofom-pitiavana ary fifampizaràna ao anatin’ny tokantrano, ny fanaovana firaisana ara-nofo.
Fa maninona kay ny ray aman-dreny no miteny foana hoe aleo rehefa afaka bac vao manao sipa ?
Ho an'ny ray aman-dreny maro, midika ho fidirana ao anatin'ny taonan'ny fahamatorana ny fahafahana bac.
Lasa nandeha nanao vakansy ny sipako dia tsy miraharaha ahy mihitsy, nefa izy hitako « connecté » foana.
Lazainy fa ny « connexion » no misy olana. Mbola tia ahy ve izy, sa miaraka amin’olona ?
Vehivavy aho. 25 taona aho izao, nefa mbola tsy manambady.
Efa nanao sipa aho, nefa tsy mety misokatra amin’ny olona tia ahy mihitsy ny fitiavako. Inona no mahatonga izany ?
Lehilahy 23 taona aho, miaraka amina vehivavy 44 taona. Manambady izy io fa mbola tsy manan-janaka, dia te hiteraka amiko, hono. Izy rahateo milaza ho tia ahy nefa tsy foiny ny vadiny. Inona no tokony ataoko ?
Tsy voalazanao, na tianao koa izy na tsia, na zavatra hafa no mampifikitra anao aminy. Na inona anefa antony iarahanao aminy, na inona, dia efa fantatrao izany fa tsy foiny ny vadiny.
Lehilahy 26 taonaaho, efatehanambady, saingy tsy hita ko izay hosafidiana amin’ireo sipako. Miaraka amin’ny vehivavy anankiroa mantsy aho. Samy tiako izy roa vavy ary samy tiaahy koa.
Misymilazahoe :matoanisyolonafaharoaniarahanaotaorian’ilayvoalohany, diasatriatsymahafapoanaoizanyilayvoalohany.
Matahotra azy aho dia manaiky tsy fidiny, nefa tsy mba mahatsapa fahasambarana mihitsy, amin'ilay voafehy loatra. Mitady ho leo aho, ka mba ampio.
Raha ny tena tokony ho izy, tsy natao hampitahotra izany vady izany. Izay no tsara anamboaranao saina voalohany, satria olon-dehibe anankiroa mitovy zo sy mitovy andraikitra ny mpivady, fa tsy misy ambony na ambany, tsy misy ny natao hanjaka sy natao hanatanteraka baiko fotsiny. Raha efa mazava sy mipetraka tsara ao an-tsainao izay dia ho mora kokoa aminao ny mandresy lahatra ny vadinao hoe : mila manana ny fahafahanao ianao. Zo fototra izany sady antoka mitondra fahasambarana ho anao. Ny fiantraikany ratsin'ilay fanjakazakany aminao no asongadino aminy ary miezaha miresaka am-pitoniana, mba tsy vao mainka hampihenjana an'ilay vadinao.
Misy vehivavy miantso ahy foana, milaza fa miaraka amin'ny vadiko. Izy indray no mivazavaza ahy sady mandrahona fa tsy maintsy hisarahan'ny vadiko, hono aho, ary hivady ry zareo. Rehefa anontaniako ny vadiko dia milaza fa tsy mahafantatra io vehivavy io akory. Toroy hevitra aho.
Aza sendaotra avy hatrany amin'ny vadinao aloha, fa diniho fotsiny ny fihetsiny raha misy fiovana. Mety hihataka kokoa izy, na mety hampiseho fitiavana kokoa, raha toa izy mampirafy. Aza mora mandray an-tendrony anefa, fa sao mora voafitaka. Ny momba ilay vehivavy indray, raha azo atao dia soloy ny nomeraom-pindainao mba tsy ho fantany intsony, mba tsy hanelingelenany anao. Raha tsy afaka manao izany ianao dia izao atao : raha mbola miantso anao dia ilazao fa hametraka fitoriana ianao. Raha mbola misisika dia tena mametraha mihitsy fitoriana fiandry, sao tena mahavanon-doza ilay vehivavy.
Tsy mba entin'ny vadiko miaraka aminy mihitsy aho, rehefa mivoaka miaraka amin'ny namany izy. Manahy aho sao misy vehivavy miaraka aminy any. Inona no tokony ataoko ?
Tsy mba entin'ny vadiko miaraka aminy mihitsy aho, rehefa mivoaka miaraka amin'ny namany izy. Manahy aho sao misy vehivavy miaraka aminy any. Inona no tokony ataoko ? Rehefa miaraka amin'ny namany ny lehilahy, amin'ny ankapobeny, dia tsy tia elingelenin'ny vehivavy. Tsy mitovy "revy" mantsy ; ny resaka atao, resa-dehilahy. Mety miteny ratsy ry zareo na miresaka lohahevitra tsy misy hidiranao loatra... Mety mihevitra koa izy fa tsy hahazo aina tsara ianao raha hiaraka amin'izy ireo. Araka izany, aza mbola miasa saina be loatra aloha. Andramo indray mandeha ny mangataka hiaraka aminy. Raha manaiky izy dia ho hitanao eo raha tsy sadaikatra ianao rehefa miaraka amin'izy ireo. Raha tsy manaiky indray, dia ezaho anontaniana azy am-pitoniana ny antony.